Somaliland: “Waxaannu U Aragnaa Saddexda Xisbi Inay Kala Wataan Laba Qaalin iyo Awr Ee Yaan Midnaba Qabyaalad Lagu Rarin..” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Waxaannu U Aragnaa Saddexda Xisbi Inay Kala Wataan Laba Qaalin iyo...
Abwaan Axmed Saleebaan Bidde
Abwaan Axmed Saleebaan Bidde, ayaa sheegay in saddexda Xisbi ee Somaliland ka jira ay kala hoggaaminayaan laba Qaalin iyo Awr, isaga oo Awrka ula jeeday Guddoomiyaha Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo uu sheegay inuu siyaasad ahaan ka waayo-aragsan yahay dhinaca Hoggaaminta Guddoonka Kulmiye iyo Waddani.
Abwaan Axmed Saleebaan Bidde oo shalay ka hadlay soo dhawayn loo sameeyey Guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo dalka ku soo laabtay bil iyo badh markii uu ku maqnaa Safar uu dalal dibedda ah ku soo maray. Abwaanku waxa uu Xisbiyada Qaranka u soo jeediyey in lagu dedaalo sidii ay nabadgelyo ugu dhammaan lahaayeen doorashooyinka soo socda ee ay ta Madaxtooyada ee u muddaysan 13-ka bisha 11-aad 2017-ka, sidii doorashooyinkii hore dalka uga soo qabsoomay-ba ay nabadgelyada ugu dhammaadeen.
“Halkaa waa lagu hirdamayaa, hawl baa ka dhici doonta, laakiin, hawlahaa saddexda Xisbi waxaa la doonayaa inay nabadgelyo sameeyaan oo aanay marnaba ka dhicin dhibaato doorashooyinka soo socda, sidii kuwii hore Dadku u galay ee aynu nabadda kaga baxnay, ee Marxuum Cigaal Dastuurka innoogu sameeyey ee aan Deero Deero hirdiyin, ayaa la doonayaa maantana nabad inay ahaato.” Sidaa ayuu yidhi Abwaan Axmed Saleebaan Bidde.
Abwaan Axmed Saleebaan oo hadalkiisa sii watay, waxa uu intaas ku daray; “Waxaa ka hadlaya oo arrintaa ka masuul ah taladeeda iyo tusaaleheeda waa Faysal Cali Waraabe iyo Xisbiga UCID, waxaanay leeyihiin; ‘waxaynu ku waarnaa waa nabad, waxaynu ku wada naallaa waa nabad’.”
“Waxaannu u aragnaa saddexda Xisbi inay kala wataan laba Qaalin iyo Awr, kolkaas yaan midnaba Qabyaalad lagu rarine labada Qaalin ha iska jiraan Qabyaaladda, Awrkuna wuu hoggaamin doonaa. Hadalladaasi waa Hees aannu soo yara qaddinnay oo aan wakhtigeedii la gaadhin, laakiin sannadkan waa la hirdamayaaye waa Hees aannu goordhaw idinku furi doonno.” Sidaa ayuu yidhi Abwaan Axmed Saleebaan Bidde.
Somaliland: Xoghayaha Guud Ee Qaramada Midoobay Oo Sheegay In Dib U Dhaca Doorashadu Nusqaamiyay Kalsoonidii Lagu Qabay Somaliland, Kana Hadlay Hawlaha Kaadh Qaybinta
Somalia: Yaab Maxa Ku Cusub Xukuumadda Farmaajo Iyo Maamulka Muqdisho Farmaajo Oo Caystay,,,